စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဒီရထားခရီးသွားလာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒါဟာအများအပြားရဲ့ပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်သူမျှသံသယရှိပါတယ်. ရိုးရိုးသားသား, အကြင်သူသည်ရထားကအခွင့်အလမ်းခရီးသွားလာပေးထားရဲ့ကကျော်ရှင်းရှင်းအရူးသွားလေ၏! အဘယ်ကြောင့်? ကခမ်းနားင်သောကြောင့်! အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလေယာဉ်စီးဆန့်ကျင်, မသက်မသာဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ယင်း၏အကြီးအသောမြေဆီလွှာပေါ်သို့သငျသညျခြေလျင် step ယခုအချိန်တွင်နေဖြင့်ရထားအီတလီနှင့်အတူလွခံရဖို့အဆင်သင့် Get. သမိုင်း၏မြေယာ, ခမ်းနားဗိသုကာ, လွှမ်းမိုးသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောကြော့, ခေတ်မီခြင်းနှင့်ကောင်းစွာယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့သောလူသင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တိုင်အောင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်!…